ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: February 2012
ခုရက်ပိုင်း ကျနော် စာတွေ သိပ်မရေးဖြစ်ဘူး သူငယ်ချင်းရေးတဲ့စာတွေပဲ တင်ဖြစ်တယ် ။ ရေးဖို့လည်း ကုန်ကြမ်းမရှိသလို ရေးပြီးသား ကုန်ချောကလည်းမရှိ ။ အသက်ကလေးရလာတယ်လို့လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပြောချင်ပါဘူး ဒါပေမယ့်လည်း လူမှုရေး လုပ်ရတာတွေ ပိုပိုများလာတယ် ။ ကိုယ့်ရဲ့ အဝေးကြီးက သူစိမ်းတွေအပေါ် လူမှုရေးကြီးတွေ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် လုပ်မှ လူမှုရေးလုပ်ငန်းလို့ ကျနော်ကတော့ မထင်ပါဘူး ဆရာဦးဟန်ကြည် ပြောတဲ့စကားလေးကို သွားသတိရတယ် *ကိုယ့်အနားမှာရှိတဲ့သူတွေကိုတောင် မချစ်တတ်တဲ့သူက မမြင်ရတဲ့ ဘုရားသခင်ကို ချစ်တယ် ဆိုတာ ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ပါ့မလဲ တဲ့ ။ ကျနော်လည်း တာဝန်တွေ များများလာတယ် ကိုယ်က ဦးလေးကိုး တစ်ခါတလေ သိပ်ကိုပင်ပန်းပါတယ် ခလေးလေးတွေလည်းမဟုတ်ကြတော့ပါပဲ ကိုယ့်မျက်စိထဲတော့ သူတို့လေးတွေ အားလုံးဟာ ခလေးလေးတွေလို့ကိုမြင်တုန်း အသေးဖွဲလေးက အစ ပြောမိနေတုန်း ဒါတွေက ချစ်ခြင်းတရားတွေဆိုတာ သူတို့တွေသိရင်ကောင်းမယ်။
ကျနော့်တုန်းက ဘယ်ဦးလေးတွေဆီကမှ မုန့်ဖိုးဆိုတာလည်းမရဖူးပါဘူး သူတို့လည်း သူတို့ဘ၀မှာ သူတို့တွေရုန်းကန်နေကြရတာ ဒါပေမယ့် တူ တူမတွေဆိုတာ မပြည့်စုံတဲ့ မိဘမှာ သူတို့ရဲ့ လိုချင်မှုလေးတွေဟာလည်း ဦးလေးတွေ အပေါ်မျှော်လင့်ချက်လေးတွေ ထားလာတတ်ကြပါတယ် ။ ကျနော့်တုန်းကတော့ ဒီလိုမျိုး ရရှိခဲ့မှုမရှိတော့ အခု ကိုယ်က ဦးလေးနေရာပြန်ရောက်တော့ တတ်နိုင်တာလေးတွေဖြည့်စည်းပေးချင်မိတယ် ။ တစ်နှစ်ကို တစ်ယောက်နှုန်းလောက်တိုးတိုးလာတယ် ။ အရင်က သေးသေးလေးတွေ ၀ယ်ပေးရတဲ့ တူတွေဟာလည်း ခုဆိုတော်တော်ကြီးကြီးမှ အဆင်ပြေတော့တာ ဒီ ဦးလေး မှာ ဖုတ်လိုက် ဖုတ်လိုက်နဲ့ ။
ခလေးတွေဟာလည်း သူတို့ ဦးလေး မဲဆောက်လိုနေရမှာ ရှိပေမယ့် သူတို့အတွက်တော့ အမေရိကားမှာ လစာ ဒေါ်လာနဲ့ချီရတဲ့ ဦးလေးပဲ ဒါကိုကတင် သူတို့အတွက်ကြွားစရာ အဖုံးမရှိတော့တဲ့ ကွမ်ဖာစုတ်လေးကိုလည်း ကြွားရတာ အမော * ဒါ ငါတို့ဦးသားလေး မဲဆောက်က ၀ယ်ပေးလိုက်တာ အကောင်းစား * တဲ့ ။ ပြီးတော့ ကိုယ်က အပေးပဲ ရှိချင်တာပဲ တကယ်ပဲ အယူပြန်ရှိရမယ့် အခြေနေကိုလည်း ကြောက်ပါတယ် ။မိဘရဲ့ ချစ်ခြင်းတရားတွေကို ရေးကြတဲ့စာမျိုးပဲဖတ်ရတာတွေများပေမယ့် ကျနော်တို့လို့ဦးလေးတွေရဲ့ ချစ်ခြင်းတရားကို ရေးမယ့်သူကတော့ ရှားမယ်ထင်ပါတယ် သွေးဟာ ရေလောက်မကျဲ သွေးက ပြန်ပြီးမွေးထားတဲ့ ရင်သွေးတွေဟာလည်း ကိုယ့်အတွက်တော့ရတနာလေးတွေပါပဲ သူတို့အားလုံးကို ကျနော်ချစ်ပါတယ် ။
တစ်ခါက မလတ် သမီးလေးအတွက်ပဲ ဂါဝန်လေးတစ်ထည်ပါသွားတယ် အရင်ဆုံးတွေ့တာက မငယ် ပြီးတော့ သူ့သမီးလေးအတွက်မပါတော့ စိတ်မကောင်းတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ ပြန်သွားတာ ကျနော့်မှာ တစ်နေ့လုံး နေမထိ ထိုင်မသာ အမေက အဲ့တာကြောင့်ပြောတာပေါ့ သားရယ် နင် အဆင်မပြေရင် တစ်ယောက်မှ မ၀ယ်ပေးနဲ့ ၀ယ်ပေးရင်လည်း အယောက်စေ့ ၀ယ်ပေးလို့ အမေပြောတာပေါ့ သူစိမ်းတွေလည်းဖက်လာတော့ စိမ်ဝမ်းကွဲဖို့လွယ်လာပြီတဲ့ အဲ့ကတည်းက ကျနော်လည်းမှတ်သွားတယ် ။ တူမလေးတွေကများတယ် သူတို့အတွက် ကလစ်သေးသေးလေးတွေစု ၊ ပိုက်ဆံအိတ်သေးသေးလေးတွေစု တော်တော်ကြီးများမှ အယောက်စေ့တယ်ထင်မှ ပို့ဖြစ်တယ် တစ်ခါတလေ ခလေးတွေ ကအဝေမတည့်တော့ နပန်းလည်း လုံးကြသေးတယ်လေ အဲ့တော့ ကြွတ်ကြွတ်အိတ်ကလေးနဲ့ထည့် အဲ့ပေါ်မှာ တစ်ခါတည်း နာမည်တပ်ပေးလိုက်တယ် အေးရော ပြီးရင် စာတိုလေးလည်းထည့်ရေးလိုက်တယ် ပေးတဲ့အတိုင်း ယူနော် မလုကြနဲ့ လုရင် နောက်မ၀ယ်ပေးတော့ဘူး အဲ့တာက သက်သေခံချက် ခလေးတွေ လုကြရင် အစ်မတွေက နင်တို့ဦးသားလေး ပေးတာပဲယူ မဟုတ်ရင် လုကြတယ်လို့ပြန်တိုင်လိုက်မယ် အဲ့တာဆို နောက် နင်တို့ဘာမှမရတော့ဘူး အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်တော့ အဲ့ဒီ လူဆိုးအသေးမွှားလေးတွေက ငြိမ်သွားကြကော ။
ကိုယ်ငယ်ငယ်ကထိန်းခဲ့ရတဲ့ တူတော်မောင် နှစ်ယောက်က ခုဆို တော်တော်ကြီး အရွယ်ရောက်နေကြပြီ ရည်းစားတွေလည်း ထားတတ်နေကြပြီ မကြီးကတော့ ခဏခဏကို တိုင်နေလို့ နားငြီးတယ်ဗျာ အဲ့တာတွေကြီးကြားရတာ စိတ်ရှုပ်လို့ လို့ပြောရတာ ။ အိမ်ပြန်တုန်းက အကြီးကောင်က ဆေးလိပ်တွေ ကွမ်းတွေပါ စားတတ်နေပြီ အစ်ကိုရယ် ကျနော်ရယ် တူနှစ်ယောက်ရယ် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တော့ အကြီးကောင် က ကောင်းကောင်းဆေးလိပ်ကိုဖွာလို့ နာရွက်ကဆွဲပြီး ခေါင်းကို ၂ဆင့်ချက်တီးထည့်ပေးလိုက်တယ် * ဦးလေးတွေရှေ့မှာ မရိုမသေနဲ့ လူကြီးကြီး လုပ်လို့ကွာ * တကယ်ဆို သူတို့တွေ အရွယ်ရောက်နေပြီဆိုတာ ကျနော် နားလည်ပေးရမှာ ဒါပေမယ့်လည်း မကောင်းတာမြင်ရင် ဆုံးမလိုက်ရမှ နေတတ်တဲ့ အကျင့်ကလည်းပြင်မရ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုတော့ လူကများတယ် သူရှက်သွားမှာ စိုးတော့ အစ်ကိုက * ငါ့ညီကလည်း သူတို့လည်း အရွယ်ရောက်ပြီ လွှတ်ထားပေးလိုက် တို့တွေ နေရာတိုင်းလိုက်ပြောဖို့မသင့်တော့ဘူး * တဲ့ အဲ့လိုကြီးလား ကျနော်ကတော့ အဲ့နေ့က တူတွေကိုပြောမရလို့ စိတ်ဆိုးပြီး အိမ်အစောကြီး တစ်ယောက်တည်း ထပြန်ခဲ့တယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဆန်းဒေးပိတ်ရက်တုန်းက ဟိုဘက်ကမ်းမှာ နေနေတဲ့ အစ်ကိုကြီးရဲ့ သား ကို ဆုံးမခန်းသွားဖွင့်ရသေးတယ် စာမေးပွဲက ဖြေရတော့မယ် သူ့ရည်းစားကောင်မလေးနဲ့ ခိုးပြေးမလိုလို ဘာလိုလိုကြားနေရတော့ အစ်ကိုကဖုန်းဆက်ပြီး နည်းနည်းပါးပါး သွားဆုံးမပါအုံးတဲ့ ဟွန်း ငါတော့နော် အသက်တိုမယ် ဒါတွေနဲ့ပဲ ။ ဆုံးမရအောင်ကလည်း ကျနော့်ကိုယ် ကျနော်တောင် ငါလူကြီးဖြစ်ပြီရဲ့လားဆိုတာ ပြန်ပြန်မေးနေရတဲ့အဖြစ် ။သူ့ကိုတွေ့တော့ ပေတလူးတုန်း အငယ်တုန်းကလို ဒီ ခလေးရုပ်ပဲရှိသေးတဲ့ ကောင်လေးက ရည်းစားတွေရလို့ ခြေလှမ်းတွေတောင် ပြင်နေပြီဆိုပါလား * မင်းအဖေကတော့ ငါ့ကို သွားဆုံးမပါအုံးတဲ့ ငါလည်း စကား အများကြီးမပြောတတ်ဘူး ဆုံးလည်းမဆုံးမတတ်ဘူး မင်းကိုယ်မင်း လူကြီးဖြစ်ပြီလို့ထင်ပြီလား ကိုယ့်မုန့်ဖိုးတောင် ကိုယ်ရှာမသုံးတတ်သေးတဲ့သူက သူများသားသမီး ယူပြီး ရှာကျွေးဖို့ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား စဉ်းစားပါအုံး သူများတွေ တက်စ်စီမောင်းသလို မင်းမောင်းနိုင်မလား ပန်းရံလုပ်ရင်ကော လုပ်နိုင်ပြီလား အေး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်စဉ်းစား မင်းတို့ဦးလေးဖြစ်တဲ့ ငါတောင် ဘာမှန်းမသိသေးတဲ့ ကိစ်စ မင်းတို့ ခေါင်းထဲရောက်နေတာ အံ့သြစရာပဲ * တူတော်မောင်က ဦးလေးဆူတော့ မျက်ရည်က စမ်းတမ်းတမ်း အဲ့လိုဆိုတော့ သနားလို့ မပြောတော့ဘူး ခပ်ပိန်ပိန် ကိုယ့်ပိုက်ဆံအိတ်ကလေးထဲက အသပြာလေးထုတ်လို့ * ရော့...မုန့်ဖိုး ဆံပင်လည်းသွားညှပ် ဖိနပ်လည်းတစ်ရံဝယ်စီးလိုက် ကျန်တာက မုန့်ဖိုး * မုန့်ဖိုးရလို့ ပျော်သွားတဲ့ သူ့ပုံစံက ခလေးတစ်ယောက်လိုဖြစ်နေတုန်း ။
အမေ့မှာ မောင်ဝမ်းကွဲ တစ်ယောက်ရှိပါတယ် လူပျိုကြီး တူ တူမတွေတော်တော်များတယ် အငယ်လေးကတည်းက သူထိန်းခဲ့တဲ့သူတွေကြီးပဲ သူ့ညီမ တစ်ယောက်ဆို ခလေးကြီး ၁၃ ယောက်လောက်ရှိတယ် မွေးထားတာ အဲ့ခလေးတွေက ကျနော်တို့နဲ့တော့ စိမ်းတယ် အနေဝေးတာလည်းပါတယ် အမေ့မောင်ဝမ်းကွဲကတော့ ရွာမှာ အိမ်ထောင်ကျပြီး နေနေတဲ့ သူ့တူတစ်ယောက်နဲ့ တူတူလာနေပါတယ် တစ်ခါတလေ အိမ်မှာ ထမင်းလာလာစားဖြစ်တယ် အမေကတော့ မောင်ဝမ်းကွဲဆိုပေမယ့် သနားလို့ သူ့ကိုမောင်လေးအရင်းတစ်ယောက်လို ချစ်ခင် ဂရုစိုက်တယ် သူကလည်း အမေ့ကို ချစ်ကြောက်ရိုသေပါပဲ ကျနော် သူ့ကို သတိထားမိတာ သူ့မှာ ဇရာရဲ့ အထုအထောင်းအပြင် စိတ်ဓာတ်ပိုင်းတွေပါ ကျကျလာသလိုပဲ အားကုန်ခမ်းနေတဲ့သူတစ်ယောက် လောကဟင်းလင်းပြင် လမ်းမကြီးမှာ တစ်ယောက်တည်း အဖော်မဲ့စွာလျှောက်လှမ်းရတာနဲ့ တူနေသလိုပါပဲ ။ မိုးတွင်း ဆို တူ က စပါးပေးနဲ့ငှားကျောင်းထားတဲ့ ကျွဲတွေကို သူက ကျောင်းပေးတယ် သူ့တူကတော့ အရက်တွေမူးလို့ အေးဆေးအိပ်နေတာ သူ့မှာတော့မိုးရွာကြီးထဲ ပင်ပန်းလိုက်တာ အချိန်တန်တော့ တူတွေက ကျွဲကျောင်းခ စပါးပေး အေးဆေးသွားထုတ်သုံးလိုက်တာပဲ ။
တစ်ခါတလေ သူလည်း စိတ်ပျက်တယ်ထင်ပါ့ အရက်တွေမူးပြီး အမေ့ကိုလာတိုင်လို့ ငိုယိုနေတတ်တယ် သူပြောတဲ့ စကားလေးက ကျနော့်ရင်ကိုထိပါတယ် * အစ်မရာ ကျနော့် တူ တူမတွေက ကျနော်ချစ်ခဲ့ရ ပေးဆပ်ခဲ့ရတာတွေနဲ့မတန်အောင် ကျနော့်ကို ဒဏ်ရာတွေ ပြန်ပေးကြတယ်ဗျာ * တဲ့ အဲ့အရက်မူးတဲ့ တူက မူးရင် ဦးလေးကို အိမ်ပေါ်က နှင်ချတတ်ပါသေးတယ် ဒီဦးလေးမရှိရင် ထမင်းငတ်ကိန်းဆိုက်မှာ သူတို့တွေ မသိကြဘူး ။ ကျနော်တို့တွေက ဦးလေးကို သနားပေမယ့် သူတို့က တူအရင်းတွေ အမြင်မတော်ပေမယ့် ရန်များလို့ ဘာမှ ၀င်မပြောကြဘူး ကျနော် မှတ်မိသလောက် အဲ့ဦးလေးက အလုပ်နဲ့ လက်ပြတ်တယ်မရှိပဲ ရှာကျွေးခဲ့တာ သူဆုံးတော့ သူရှာကျွေးခဲ့တဲ့ တူ တွေ တူမတွေ က ရှောင်ဖယ်ဖယ် နဲ့ အမေတို့ မောင်နှမတွေကပဲ သူတို့မောင် လူပျိုကြီးကို နောက်ဆုံးခရီး လှအောင် စီစဉ်ပေးခဲ့ရတာ ကျနော် အဲ့အဖြစ်ကြီးကို ကြားရ မြင်ရတော့ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ အမေ့ကိုပြောဖြစ်သေးတယ် * မေ.... သားအလှည့်ကျရင်လည်း အဲ့လိုဖြစ် ဒုက်ခပဲနော် * ဆိုတော့ အမေက ရယ်လို့ *သားရယ် နင်ကလည်း လိုက်တွေးပူနေတယ် အဲ့လိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေ ဒါကြောင့် အမေက နင့်တစ်ယောက်တည်းကို စိတ်မချတာပေါ့ ကိုယ့်မိသားစုလေးနဲ့ကိုယ်ဆို ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သေပန်းတော့ လှမှာပေါ့ * တဲ့ ကျနော် ကကော ကိုယ်ပိုင်မိသားစုလေး မတည်ဆောက်နိုင်ရင် သေပန်းမလှနိုင်တော့ဘူးလား?
ဒါပေမယ့် ကိုယ်မလှရင်နေပါစေ ကိုယ့်အစွယ်အပါးလေးတွေကိုတော့ တတ်နိုင်သလောက် ဖြည့်စည်းပေးချင်သေးတယ် သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်လေးတွေ ဖြည့်ပေးချင်သေးတယ် ။ ရွာက သူတစ်ချို့က နင်ကတော့ ၀ဋ်ပဲ ဒီ တူ တူမတွေနဲ့တဲ့ ။ ကျနော်ကတော့ ၀ဋ်လို့မထင်ပါဘူး ကျနော် ပင်ပန်းပေမယ့် ပျော်ပါတယ် ဘာမှမဟုတ်တဲ့ အရာလေးပေမယ့် ကျနော့် တူ တူမလေးတွေ ဒါက ငါတို့ဦးသားလေး ၀ယ်ပေးတာဆိုတဲ့ အပြုံးမျက်နှာလေးနဲ့ ၀ံ့ကြွားသံလေးတွေက ကျနော့်ရဲ့ ဖြေသိမ့်ရာပါပဲ သူတို့လေးတွေ ပျော်ရင် ကျနော် လည်းပျော်ပါတယ် ။ ခု ဆို သင်္ကြန်နီးပြီ တောက ခလေးတွေ ရက်ကြီးခါကြီးမှ အ၀တ်စားသစ်ဆိုတာ ၀တ်ရတာ ရွာမှာဆို တစ်ယောက်အကျ နောက်အငယ်တစ်ယောက်က ထပ်ပြီးတော့ဝတ် ဒါပဲ ။ မြို့က မကြီးနဲ့ဖုန်းပြောဖြစ်တော့ ရွာရောက်တော့ ခလေးတွေက မှာတယ် ဒီနှစ်လည်း သင်္ကြန်ကျရင် ဦးသားလေး ကို အကျီ င်္လှလှလေးတွေ ၀ယ်ပို့လိုက်ဖို့ မှာလိုက်တယ်တဲ့ တစ်ယောက်က ဘွတ်ဖိနပ်တဲ့ နောက်တစ်ယောက်က နားကပ်တွဲလောင်းလောင်းလေးတဲ့ တစ်ယောက်က ရေပြွတ်တဲ့ မှာတာတွေက စုံလို့ မကြီးကတော့ ရယ်သံစွက်ပြီးပြောနေပေမယ့် ကျနော်က ဘော်ပင်လေးနဲ့ မှတ်လို့ ၀ယ်ပို့ရမယ့်စာရင်းထဲ ထည့်ထားလိုက်တယ် ဒါကို ကပဲ ဦးလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းပါ ။
ဦးလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာတရားဟာ မိခင် ဖခင်တွေလောက်မကြီးမားပေမယ့် ပေးဆပ်ခြင်း တွေနဲ့ တည်မြဲတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ရှိနေတတ်တယ်ဆိုတာ ဦးလေးတစ်ယောက် အနေနဲ့ ပြောပြချင်မိပါရဲ့ မိတ်ဆွေတို့မှာကော ဦးလေးရှိကြပါသလား ? တစ်ခါတရံမှာ အခွင့်အခါမကြုံလို့ ကိုယ့်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကိုမဖြည့်စည်းပေးနိုင်ခဲ့ရင်တောင် အဲ့ဒီ ဦးလေးရဲ့ရင်ထဲမှာ တူ တူမတွေအပေါ် ဖြည့်စည်းပေးချင်စိတ်လေးတွေရှိနေတတ်တယ်ဆိုတာ ယုံကြည်လက်ခံပေးပါ ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ ဂရုစိုက်မှုတွေကို အသိမှတ်ပြုပေးဖို့ နောက်မကျမိပါစေနဲ့လို့ အကြံပြုချင်မိပါရဲ့ ။ဦးလေး ဆိုတဲ့ နာမ်စားလေးနဲ့တင် ကျနော်တို့တွေ ဖြည့်စည်းပေးရကျိုး နပ်ပါတယ်ဗျာ ။
လွန်ခဲ့တဲ့လ ကတည်းက ကြည့်မယ်ကြည့်မယ်နဲ့ မကြည့်ဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ မိတ်ဆွေတယောက်က ကြည့်သင့်တဲ့ဇာတ်ကား တကားလို့ အကြိမ်ကြိမ်ညွှန်းဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မအားလို့မရှာနိုင် မရှာနိုင်လို့ မကြည့်ဖြစ်နဲ့ အဲ့လိုဖြစ်နေတာပါ။ တကယ်တမ်း အီရန်ကားကို ဒီတခါ ပထမဆုံးကြည့်ဖူးတာပါ။ ခံစားမိတာတော့ မိသားစုရယ် တိုင်းပြည်ရယ် ပြီးတော့ လူ့အတ္တတွေ၊ ကျင့်ဝတ်တွေအကြောင်း။
မိသားစုတစုရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် ပြဿနာဆိုတာ အသေးအမွှားကနေ အကြီးမားဆုံးအထိပေါ့။ ကိုယ့်အတွက်တော့ အကြီးမားဆုံးဆိုတာ မိသားစုပြိုကွဲတဲ့ ကိစ္စပါပဲ။ လင်ကိုယ်မယားနှစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ပဲ သားသမီးတွေပါ တနွယ်ငင်တစင်ပါခဲ့ရင် မိရယ်ဖရယ် စုံစုံညီညီ မနေရမယ့် သားသမီးတွေအဖြစ်က ရင်နင့်စရာမို့ပါ။ အခုဇာတ်ကားမှာလည်း လင်မယားနှစ်ယောက် ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်းကနေ အစပြုထားပါတယ်။ စစခြင်းကို ဆောက်နဲ့ထွင်းသလိုမျိုးပါ။ မိန်းမဖက်ကနေ ကွာရှင်းဖို့လျှောက်ထားတာဖြစ်ပြီး ကွာရှင်း ရခြင်းအကြောင်းကို မေးမြန်းတဲ့အခါ
တရားသူကြီး ။ သူက ရိုက်နှက်လို့လား သူက မထောက်ပံ့လို့လား
မိန်းမ ။ အဲ့ဒါတွေတခုမှမဟုတ်ပါဘူး။ သူက ကျွန်မသွားမယ့် နောက်ကို မလိုက်ခဲ့လို့ပါ။
ယောင်္ကျား ။ မင်းသေသေချာချာစဉ်းစားပါ။ မင်းနောက်ကို လိုက်ရအောင် ငါ့ရဲ့ အယ်ဇိုင်းမားဖြစ်နေတဲ့ အဖေကို ငါဘယ်လိုထားခဲ့နိုင်မလဲ။
မိန်းမ ။ သူ့ကိုတောင် သားမှန်းမသိတဲ့အဖေကို စောင့်ရှောက်ဖို့ ကျွန်မတို့ရဲ့ အညွှန့်တလူလူနဲ့ သမီးလေးရဲ့ တက်လမ်းကို ရိုက်ချိုးချင်တဲ့သူ. အသုံးမကျတဲ့သူ။
ယောင်္ကျား ။ ဒါပေမယ့် ငါ့အဖေကို ငါက အဖေမှန်းသိသိနဲ့ ဒီပုံစံမျိုး လက်လွတ်စပယ် ငါမထားခဲ့နိုင်ဘူး။ နေစမ်းပါဦး သမီးက ဒီမှာနေရင် မတိုးတက်နိုင်တော့ဘူးလို့ မင်းထင်သလား။
အရင်းစစ်တော့ အမြစ်မြေက ဆိုသလိုပါပဲ။ မိဘဆိုတာ သားသမီးကို တိုးတက်ကြီးပွားကောင်းစား စေချင်ကြတာပါ။ ကိုယ့်သားသမီးကို အကောင်းဆုံး လုပ်ပေးချင်တာ မိဘတိုင်းရဲ့ တူညီတဲ့ ဆန္ဒအမှန်ပါပဲ။ မိန်းမလုပ်သူက နိုင်ငံခြား (အမေရိကန် ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်) ကို ထွက်ပြီး သမီးရဲ့ ပညာရေးကို မြေတောင်မြှောက်ပေးချင်တယ်။ ယောင်္ကျားလုပ်သူကတော့ အဖေ လူမမာကြီးကိုပစ်ပြီး မထွက်သွားခဲ့နိုင်သူ၊ ဒီမှာနေလည်း သူ့သမီးဟာ ပညာတတ်တယောက် ဖြစ်မှာပဲလို့ လက်ခံထားတဲ့သူပေါ့။ နောက်ဆုံး တိုင်းပြည်ဆိုတဲ့ အရာက ပါဝင်ပတ်သက်လာခဲ့ပါပြီ။
တိုင်းပြည် တခုရဲ့ တိုးတက်မှုကို ပုံမှန်တိုင်းတာရရင် တိုင်းပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး တွေနဲ့ စတင်တိုင်းတာရပါလိမ့်မယ်။ ပညာတတ်တွေ ထွန်းကားတဲ့တိုင်းပြည်မှာ သယံဇာတ မရှိလည်း ကြီးပွားချမ်းသာနိုင်တယ်ဆိုတာ အခုခေတ်မှာ လူတိုင်း မျက်မြင်ပါပဲ။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်က ကျောင်းသားလူငယ်တွေ (တကယ်က တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ လူ့အရင်းအမြစ်တွေပါ) တခြား တိုင်းပြည်ကို ပညာသွားရောက်သင်ယူရတယ်ဆိုတာကို ထောက်ချင့်ရင် အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ ပညာရေးဝန်ဆောင်မှု (တကယ်က နောင်တချိန်မှာ ပွင့်မယ့်အသီးအပွင့်တွေ အတွက် မြေတောင်မြှောက်ပေါင်းသင်ပေးတာပါ) အတိမ်အနက်ကို ခန့်မှန်းမိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အီရန်ဆိုတဲ့ တိုင်းပြည် အကြောင်းကို အခုမှ ကြားဖူးတာမှ မဟုတ်တာပဲနော်။
နိုင်ငံအတွင်းက ပညာတတ်တွေ တခြားနိုင်ငံကို ကူးပြောင်းကြတယ်ဆိုတာ တကယ်တမ်းတော့ မလွယ်ကူပါဘူး။ တချို့က မိမိဘဝရှေ့ရေးအတွက်၊ ဓနဥစ္စာအတွက်၊ သားသမီးနောင်ရေးအတွက် စတဲ့ အချက်အလက်တွေကို အခြေခံသလို၊ နိုင်ငံရေးပြစ်မှုကြောင့် မွေးရပ်နိုင်ငံကို မဖြစ်မနေစွန့်ခွာပြီး ကူးပြောင်းမှုစတဲ့အကြောင်းအရာ ပေါင်းစုံပါပဲ။ နေရင်းထိုင်းရင်းကနေမှ
နောက်ဆုံးရေကြည်ရာမြက်နုရာ ပြောင်းရွှေ့သူကနေ မွေးရပ်မြေကိုစွန့်လွှတ်နိုင်သူတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။ ဒါက ရုပ်ရှင်ကနေ ရလာတဲ့ တိုင်းပြည်ဆိုတဲ့ အတွေးပါ. ဘာကြောင့်ပြောင်းချင်သလဲဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကို မြန်မာတွေက ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားနိုင်မှာပါလေ။
တိုင်းပြည်ကူးပြောင်းချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ (ကူးပြောင်းလိုတဲ့အချက်က သမီးအတွက်ဖြစ်ပေမယ့်) ကွာရှင်းခွင့် တောင်းတဲ့ မိန်းမကို တရားရုံးက လက်မခံဘူးဆိုတာ သဘာဝကျပါတယ်။ ကွာရှင်းခွင့်မရသော်လည်း မိန်းမဆိုတဲ့ ဗီဇစိတ်နဲ့ အိမ်ကဆင်းတယ်ဆိုပြီး အနိုင်ယူပါတော့တယ်။ မဆင်းခင်မှာ ယောက္ခမလူမမာ အတွက် ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ လူစားထိုးလေးတော့ ရှာပေးခဲ့ရှာပါသေးတယ်။ သူ့လက်ကိုဆွဲပြီး မဆင်းဖို့တားတဲ့ ယောက္ခမရယ်၊ သူ့နောက်ကို မလိုက်လာတဲ့ သမီးရယ်ကြောင့် နောက်ဆံက တတင်းတင်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဆင်းမယ်လို့ စကားကျွံပြီးပြီမဟုတ်လား။
လူမမာကိုပြုစုစောင့်ရှောက်မယ့်သူ ကလည်း ဘာသာရေးစိတ်ဓါတ်ပြင်းထန်သူ။ သူ့လုပ်ရပ်တွေအားလုံးဟာ အပြစ်ငြိစွန်းခြင်း အလျဉ်းမရှိစေလိုသူတယောက်။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာမီးလောင် သားကောင်တောင်ချနင်းရသေးတာမို့ ဒီအလုပ်ကို လင်ယောင်္ကျားခွင့်ပြုချက် မပါပဲ လက်ခံလိုက်ပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းကတော့ လူမှုစားဝတ်နေရေးဆိုတဲ့ ကမ္ဘာ့ကပ်ကြီးကြောင့်ပါပဲ။ အပြင်မှာ သူနဲ့ပါလာတဲ့ သမီးက တယောက် အခုလက်ရှိ ဝမ်းကြာတိုက်ထဲမှာက တယောက်ဆိုတော့ ကိုယ့်ဝမ်းနာ ကိုယ်သာသိရပြီပေါ့။
လူမမာအဖိုးကြီးကို သန့်စင်ဆေးကြောပေးဖို့ဆိုတဲ့ အချက်တွေ အလုပ်လက်ခံစတုန်းမှာ သူစေ့စေ့မှ မတွေးခဲ့ပါဘူး။ တကယ်တမ်း ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ နောက်နေ့မလုပ်တော့ပါဘူးလို့ပဲ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီဝင်ငွေကိုလည်း သူလိုချင်ပြန်တယ်။ သူ့အစား အမျိုးသားကိုလုပ်ဖို့ စီစဉ်သော်လည်း လွဲခဲ့ပြန်ပါတယ်။ အယ်ဇိုင်းမား လူနာတယောက်ကို စောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုတာ တော်ရုံတန်ရုံနဲ့တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ဆိုတာ သိလိုက်ရချိန်မှာ အတော်လေး နောက်ကျနေခဲ့ပါပြီ။ နောက်လည်း ဆုတ်လို့ မရမယ့် အတူတူ ရှေ့ကိုပဲ တိုးရုံ မှတပါး အခြားမရှိ။
ပြဿနာဆိုတာ စုပြုံပြီး ဝင်လာတတ်တာမျိုး။ အဓိကကတော့ လူမမာအဖိုးအိုကို ကုတင်တိုင်မှာ ကြိုးနဲ့ချည်ပြီး အပြင်ထွက်သွားရာက စပါတယ်။ လူဆိုတဲ့အမျိုးက အဲ့လူမကောင်းဘူးလို့ယူဆရင် သူ့ရဲ့ ပြစ်ချက်တွေကို အရင်ရှာတော့တာမျိုးပါ။ အံဆွဲထဲက ပိုက်ဆံတွေ မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ ပြစ်မှု သိပ်ကြီးသွားပါပြီ။ အငြင်းအခုံ အပြင်းအထန် တိုက်ပွဲကြားမှာ အရာအားလုံးက ဗြောင်းဆန်။ လူမမာအဖေက ရေချိုးခန်းထဲမှာ တယောက်တည်း ရေဝင်ချိုး၊အပြင်မှာလည်း အကူမိန်းမနဲ့ စကားတွေများ စိတ်တွေထွေနေတဲ့သူနဲ့၊ ဘာသာရေးစိတ်ဓါတ်ပြင်းထန်ပြီး ပိုက်ဆံခိုးတယ်လို့ စွပ်စွဲတာကို ဘယ်လိုမှသည်းညည်းမခံနိုင်တဲ့သူ၊ သူတို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ ပြိုင်တူအမှားက ဆေးရုံကိုရောက်၊ ဆေးရုံကနေမှ တရားရုံးအထိ ဖြစ်ပျက်ကုန်ပါတယ်။
ကလေးပျက်ကျစေတဲ့အတွက် အိမ်ရှင်အမျိုးသားကို လူသတ်မှုနဲ့ တရားစွဲဆိုခံရသလို၊ ညောင်မြစ်တူးတော့ ညောင်ဥပေါ်သလို အကူမိန်းမရဲ့ လူမမာအဖိုးအိုကို ကုတင်တိုင်ကြိုးနဲ့ချည်တဲ့အမှုပါတိုးရင်း နှစ်ဖက်စလုံး နစ်သည်ထက်နစ် နက်သည်ထက်နက် လာပါတော့တယ်။
လူ့အတ္တဆိုတာ ငါ၊ ငါ့မိသားစု၊ ငါ့သားသမီး ဆိုတဲ့ အတ္တတွေပါ။ အကူမိန်းမကိုယ်ဝန်ရှိတဲ့အကြောင်းကို သိပေမယ့် သူမရှိရင် သူ့အဖေကို၊သူ့သမီးကို ဘယ်သူကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်မလဲဆိုတဲ့ အတ္တနဲ့ မသိဘူးလို့ ဘူးခံတာ အိမ်ရှင်အမျိုးသားရဲ့ အတ္တပါ။ အိမ်အကူအမျိုးသမီးရဲ့ အတ္တကိုတော့ ဇာတ်လမ်းမြုပ်ကွက်တခုမို့ ထည့်မရေးပေးလိုက်တော့ပါဘူး။ ကြည့်ရင်းနဲ့ တွေ့သွားကြမှာပါပဲ။
မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဆိုတော့ မနစ်နာစေလိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ထွက်ဆိုချက်တွေ အတွက် နောက်တချိန် အကူအမျိုးသမီးရဲ့ သွေးဆိုးဆိုးယောင်္ကျား ခြိမ်းခြောက်သံတွေကြားမှာ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထွက်
ဆိုတာတွေဟာ ပထမ ငါ့မိတ်ဆွေအတွက်ဆိုတဲ့ အတ္တကို ငါကိုယ်တိုင်အတွက်ဆိုတဲ့အတ္တက ဖုံးလွှမ်းသွားစေတာမျိုးပါ။
နောက်တခုက အိမ်ရှင်ယောင်္ကျားနဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ စိတ်ခံစားမှုပါ။ ၁၄နှစ်ကြာပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကိုမှ မထောက် နိုင်ငံကူးပြောင်းလိုမှုနဲ့ အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းသွားလိုက်တာလို့ တယောက်က ထိခိုက် ခံစားနေသလို၊ အိမ်ပေါ်ကနေမဆင်းပါနဲ့ လို့မတားသလို ပြန်လာပါလို့လည်း မခေါ်တဲ့အတွက် နင့်နင့်သီးသီး စိတ်နာကျင်ခံစားနေသူက တယောက်။ ဒီနှစ်ယောက်ကြားမှာ အပျိုဖော်ဝင်စ သမီးရဲ့ ရပ်တည်မှုက ပိုပြီး ကြေကွဲဝမ်းနည်းစေပါတယ်။
နောက်ဆုံး သူတို့အိမ်ထောင်ကွဲသွားကြတယ်။ တရားသူကြီးက အမိနဲ့ အဖ ဘယ်သူ့ကိုရွေးမလဲလို့ သမီးကို ဆုံးဖြတ်စေတဲ့အခန်းနဲ့ ဇာတ်လမ်းကို သိမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ မရွေးချယ်စေချင်ခဲ့တာ အမှန်ပါပဲ။ ငယ်ငယ်တုန်းက လိပ်ပြာခွဲတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို မြင်ဖူးပြီးနောက်ပိုင်းမှာ စိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲရတာမို့ နောက်တခါ အဲ့လို ဆုံးဖြတ်ကြတာမျိုး ဘယ်လိုမှ အကြောင်းကြောင့်နဲ့မှ မဆုံချင် မကြုံချင်ခဲ့ပါဘူး။
မိသားစု၊တိုင်းပြည် ပြီးတော့ လူတွေရဲ့ အတ္တ၊ ကျင့်ဝတ်တွေ ကြားမှာ လောကကြီးကတော့ အရှိန်မပျက် ဆက်လက် ဖြစ်ပျက်နေတုန်းပါပဲလေ..။
ကိုယ့်ရဲ့ ညပေါင်းများစွာမှာ ကိုယ်ဟာ မအိပ်နိုင်တာလား အိပ်မပျော်တာပဲလား မဝေခွဲတတ်နိုင်ပါ။ သိတတ်စ အရွယ်ကတည်းက အိပ်မက်တွေနဲ့အတူ ညတိုင်း ကိုယ့်ကို နှိပ်စက်နေကြ မဟုတ်လား။ တိုးတိုးသဲ့သဲ့ ကြားတတ်တဲ့ ဗုံသံတွေနဲ့အတူ လမ်းမကျယ်ကျယ်တွေ ကျောက်တုံးတွေ အထပ်ထပ်စီထားတဲ့ နေရာတွေ။ ပုဂံကခြေသည်ဟန် ဆင်ဆင်တူတဲ့ ကခြေသည်တွေရဲ့ ခြေကျင်းသံတွေ။ ငြိမ့်ငြိမ့်လေး တိုက်ခတ်သွားတဲ့ လေထုထဲက ရနံ့တွေထဲမှာ ဘယ်နေရာဆိုတာများ ပါနိုင်လေမလား…တကယ်တော့ အဖြေမရှာတတ်နိုင်ခဲ့။
လေဆိပ်ပေါ်ကဆင်းတာနဲ့ ဖျတ်ခနဲ ရလိုက်တဲ့ ရနံ့။ စိတ်ထဲမှာ သရိုးသရီ ဖြစ်သွားမိတယ်။ အိပ်မက်ထဲက ရနံ့။ ဒီမြို့ဟာ ကိုယ့်အိပ်မက်ထဲက မြို့များလား။ စိုးထင့်စိတ်နဲ့ လေဆိပ်ကနေမျှော်ကြည့်တော့ ခေတ်မှီတိုက်တာတွေက ကိုယ့်အိပ်မက်နဲ့ တခြားစီ။ အပန်းဖြေအလည်လာတဲ့ ခရီးပဲလေ။ ရာဇဝင်ကို မြေလှန်ဖို့မှ မဟုတ်ပဲ။ တခုပဲ သူများရပ်ရွာမှာ ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်နေမှ။ မဟုတ်ရင် မနက်ဖြန် ခရီးစဉ်မှာ ခေါင်းကြည်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အိပ်မှ..
Photo: Candi Sewu
မိုးလင်းတော့ ပထမဆုံး စသွားတဲ့ ဘုရားတစ်ဆူကတင် စိတ်ကို အတော်လေး လှုပ်ခပ်စေခဲ့ပြီ။ ဘုရားအရှေ့က ရုပ်ထုကြီးနှစ်ခု။ သူတို့က သိပ်သိသာစေတယ်။ လှပ်ခနဲ ခုန်နေတဲ့ ရင်ကိုဖိပြီး ဘုရားဖူးစို့ ရယ်လို့ စေ့ဆော်ရင်း မဟုတ်ဘူးလို့ သိစိတ်နဲ့ ဇွတ်ငြင်းနေမိတယ်။
Photo: Candi Mendut
နောက်တစ်ဆူ ရှေ့မျက်မှောက်မှာတော့ တုန်တုန်လှုပ်လှုပ်နဲ့ လက်အုပ်ချီမိတယ်။ အသိဉာဏ်ပညာနဲ့ ပြည့်စုံတော်မူသော ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာ ကိုယ့်ရဲ့ သိစိတ်နဲ့ ထိန်းချုပ်ထားသမျှတွေ ပျောက်ရှ ကုန်တော့တာ။ ဒီနေရာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ဟိုးအတိတ်က အရိပ်တွေ ရှိတယ်ဆိုတာ မသိစိတ်ထဲကနေ ဖွင့်အန်ကျလာတော့တာပါပဲ။ ဒီဂူဘုရားရဲ့ အေးမြမှု အောက်မှာ မျက်ရည်တွေ ဖြိုင်ဖြိုင်ဆီးပြီး ကိုယ့်ဘဝင်မှာ ငြိတွယ်နေမိပြီ။ ဘုရားဘေးက ညောင်ပင်ကြီးကို မှီတွယ်ရင်း လွမ်းစိတ်တွေက တအားလာတိုးထိတယ်။ လန့်သွားမိတယ်။
Photo: Candi Sari
ဒီဝိဟာရ အရောက်မှာတော့ ကိုယ့်အိမ်ကို ပြန်ရောက်တဲ့ ခရီးသည်တယောက်လို ခံစားမိတယ်။ နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်မို့ စာကြည့်ဆောင်၊ ဘုရားခန်းဆောင်ရယ်လို့ ကိုယ့်ဖာသာ နှုတ်ကရေရွတ်ရင်း ဆိုနင့်လာမိတယ်။ ကြည့်ပါအုံး ကျောင်းတခုလုံး ကြေမွပျက်စီး ကုန်ပါရောလား။ ကျောင်းအထက်က မြက်ပင်ငယ်တွေ ရှင်းလင်းသူမရှိ။ အမွန်းအပျောက်တွေလည်း ပြိုပျက်လဲလျောင်းရင်း မြေပေါ်မှာ စက်ပျော်နေပါပေါ့။ လှေခါးတွေလည်း လှည်းကျင်းသူမဲ့ခဲ့ပြီ။ ဟိုအရင်တုန်းက ရဟန်းသံဃာတွေနဲ့ အမြဲမပြတ် စည်ကားနေခဲ့တာ။ အခုများတော့…
မရွှင်ပျတဲ့ စိတ်နဲ့ လာရင်းအရပ်ကို ပြန်ခဲ့ရတယ်။ အတိတ်ဆိုတာက မေ့ဖျောက်ဖို့ပဲ အကောင်းသားမဟုတ်ပါလား။
အခွင့်ရယ်ကြုံပြန်တော့ နောက်တမြို့တရွာဆီကိုပေါ့။ စကတည်းက ယဉ်သကိုဆိုသလို။ Aspara ဆိုတဲ့ ကိုယ့်အိပ်မက်ထဲက ကခြေသည်တွေ။ ကျောက်တုံးပေါ်က သူတို့နှစ်ယောက်ကို ကြည့်ရင်း ဆက်ပြီးဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ မသိတတ်တော့။ ရှေ့ဆက်ရမယ့် ခြေလှမ်းတွေထက် ကိုယ့်စိတ်ဝိဉာဉ်ကိုပါ သူတို့ နှုတ်သိမ်းလိုက်ကြတော့မလိုလို။ နားထဲမှာ ကြားယောင်လာတာက သူတို့ရဲ့ ခြေကျင်းသံ တချွင်ချွင်။
Photo: From the tree
ကြောက်ကြောက် နဲ့ မကြည့်ရဲကြည့်ရဲ သစ်ခေါင်းထဲကနေ ကြည့်နေမိတယ်။ ဒိတ်ကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့ စိတ်ကို သတိနဲ့ လိုက်ပြီးဖေးမနေရတယ်။ ဒီအရပ်ဒေသတွေက သိပ်ရင်းနှီးနေခဲ့တယ်။ အာရုံတွေ မပျံ့လွင့်ပါစေနဲ့။ နံရံကိုကပ် မင်း ရင်ဘတ်ကို ထုကြည့်စမ်းဆိုတဲ့ နေရာအရောက်မှာတော့ ကိုယ့်ရင်ဘတ်က မထုပဲ အသံတွေမြည်ဟိန်းနေခဲ့လိုက်တာ။ အတိတ်ဆိုတာ အရိပ်လိုပါပဲလား ထပ်ချပ်မကွာပေမယ့် ခံစားသိတဲ့ အသိနဲ့အတူ ခြောက်လှန့်နေသလိုလိုပါ။
Photo: War painting
စစ်ပွဲဆိုတဲ့ အနှိဌာရုံတွေကို နံရံရုပ်ထုတွေအပေါ်မှာ မြင်ရတဲ့အခါ တိုက်ပွဲရဲ့အသံတွေ နဲ့အတူ ကိုယ့်ရဲ့ စစ်ပွဲကို စက်ဆုပ်ရွံရှာတဲ့ စိတ်ခံစားမှုကိုပါ ပြန်ရလိုက်တယ်။ လူတွေရဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေ ကြောင့် ဖြစ်လာတတ်တာ စစ်ပွဲမျိုးစုံ မဟုတ်လား။ အခုလို လက်နက်တွေနဲ့ ခင်းကြသလို စစ်အေးတိုက်ပွဲလိုမျိုး ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ စစ်ပွဲတွေလည်း ရှိရဲ့။ နာကျည်းမုန်းတီးခြင်းတွေနဲ့ လက်သီးကိုကျစ်ကျစ်ဆုပ်မိလျက်သား မဖြေလျော့မိခဲ့။
Photo: Prasat Thom
ကိုယ့်အိပ်မက်ထဲက ဘုရားတစ်ဆူဟာ သိပ်ကို ကြီးမားနေခဲ့တယ်။ ပိရမစ်လိုလို၊ နောင်တချိန်ကိုယ်စာတွေဖတ်ရင်း စိတ်ထဲမှာ ရောထွေးနေမိတာက မာယာလူမျိုးတွေရဲ့ ဘုရားလိုလို။ ဒါပေမယ့် အခုလက်တွေ့မြင်လိုက် ရတော့ ကိုယ့်အထင်တွေ လွဲမှားနေခဲ့ပြီ။ ကြီးမားတဲ့ ကျောက်တုံးတွေနဲ့ ဝန်းရံ နေတဲ့ မြင့်မားလှသော ဟောဒီစေတီ။ ကံဆိုးလှစွာ ကိုယ်ဟာ အပေါ်ကိုတက်ပြီး ဖူးမျှော်ဖို့ အခွင့်မကြုံလိုက်ရဘူး။ ဒါလည်း ခပ်ကောင်းကောင်းပါ အကယ်၍များ တက်နေရင်း ခြေချော်လက်ချော်ဖြစ်ခဲ့ရင် ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ထဲ တမျိုးတမည်လည်း မှတ်ယူသွားနိုင်သေးတယ် မဟုတ်လား။
မြို့နှစ်မြို့ အပြီးမှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ သံသယက အတော်လေး ခိုင်လုံနေခဲ့ပြီ။ ကိုယ်နောက်ထပ် သွားရမယ့်မြို့ကိုလည်း စီစဉ်ခဲ့ပြီဆိုပါတော့။ အဲ့ဒီနေရာက ကိုယ့်ကို ခေါ်ငှင်နေခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ ကိုယ်လာပြီ မြို့ဟောင်းလေး ရေ….
Photo: Cham Museum
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ ရုပ်စုံပုလ္လင်တော် ရှေ့မှာ ခစားရောက်မိတယ်။ လူ့လောဘသားကောင်တွေရဲ့ လက်ချက်အောက်မှာ ဘုရားရှင်ရဲ့ မျက်နှာတော်ကို မော်ဖူးခွင့် မကြုံကြိုက်နိုင်တော့ပြီပေါ့။ ဇာတ်နိပါတ်တော်တွေကို ပုလ္လင်တော် ပတ်ပတ်လည်မှာ ထွင်းထုပူဇော်ခဲ့ကြတာ ဖူးမျှော်လို့ မဆုံးနိုင်အောင်ပါပဲ။
Photo: Aspara Dance
ကခြေသည်တို့ကို ရုပ်ထု အဖြစ်မှ သက်ရှိအသွင် အဖြစ် မြင်ရပြီ။ စည်းချက်သံနဲ့ ခေါင်းခါးခြေလက်တို့ ချိုးကွေ့သွားလိုက်တိုင်း စိတ်က ဟိုးအတိတ်ဆီကို လွင့်ထွက်သွားစမြဲ။ နောက်ခံကြေငြာသူရဲ့ ဒီနေ့ကြွလာ မိတ်သဟာ စိတ်မှာရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေဆိုတဲ့ အသံကြားတာတောင် ကိုယ့်လိပ်ပြာက လွင့်ပျံနေဆဲ။ အနောက်ခုံကနေ ဖြတ်သွားခွင့်ပြုပါလို့ တောင်းပန်သံကြားမှ ဒီဘက်ခေတ်ကို ပြန်ရောက်လာတော့ လိုက်တာ။
Photo: Mỹ Sơn
မြင့်မြတ်တဲ့နယ်မြေ။ တောင်တွေဝန်းရံ ထားတဲ့ ရှေးက တန်ခိုးရှင်တွေဆင်းသက် လာတတ်တဲ့နယ်မြေ။ နှင်းတွေအုပ်ဆိုင်းနေတဲ့ ကြားက မြေနီနီ စိမ်းရောင်စုံ ကားချပ်ထဲက စေတီတွေ။ ဒီနေရာမှာ ပျော်ပါးခဲ့ဖူးသလိုလို။ တောင်တွေဆီက လာရောက်ခေါ်ငှင်သံတွေဟာ အိပ်မက်ထဲမှာ လာလာခေါ်ငှင်တဲ့ အသံတွေ။ စကားတွေ ပြောကြပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ကိုယ့်ကို မင်းတို့ဆီကို ခေါ်ပါ..
ဒီမြို့တွေ အားလုံးကနေရတဲ့ သေချာပြီဆိုတဲ့အသိနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ နောက်ထပ် ခြေလှမ်းက မြို့တော်တစ်ခုဆီကိုပဲပေါ့။ အဲ့ဒီကို ရောက်ရင်တော့ ကိုယ် အဖြေ တစ်ခု သိတန်ကောင်းပါရဲ့နော်..။
P.S = ကျနော့် ဘလော့ စာဖတ်သူတစ်ယောက်ရဲ့ ခရီးသွားပို့စ်လေးပါ ။
at 8:33 PM 10 comments
ထုံးစံအတိုင်း ကွန်ပြူတာနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေတုန်းမှာ မက်ဆေ့တခုက ဝင်လာခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ညလသာသတဲ့။ သော့ခတ်ထားတဲ့ ပြတင်းပေါက်တစုံကို ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားရင်း ဖြတ်ကျော်ခဲ့တဲ့ လသာညပေါင်းများစွာကလည်း စိတ်တံခါးပေါက်ကနေ အစီအရီထွက်ကျလာခဲ့လိုက်တာ။
လသာတဲ့ညတွေတိုင်း ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲလို့ စိတ်ကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်ပြန်စီဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက အမေနဲ့အတူ လကိုငေးပြီး ကဗျာတွေရွတ်ခဲ့ဖူးတာ ကိုစပြီး အမှတ်ရမိ။ အမေ့ရဲ့ ဓမ္မစကြာ ရွတ်ဖတ်သံ ကိုနားထဲက တိုးတိုးလေး ကြားယောင်။ နောက်တော့ကော…
သိတတ်စအရွယ်မှာ ဆော့ကစားဖူးတဲ့ လသာညပေါင်းများစွာ။ ထုပ်ဆီးတိုး၊ ဘုတ်ဒီထိုးတမ်း ပြေးတမ်းလိုက်တမ်း၊ညောင်ပင်တစေ ဝေလေလေ၊ ကုန်းလားရေလား၊ လိပ်ဥပျောက်လို့လိပ်မ,ရှာ၊ ဆီမီးခွက်ကြီးတပြောင်ပြောင် စသည် ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ညတွေက မရေတွက်နိုင်အောင်ပါ။ ရက်ကြီးအခါကြီး လသာညတွေ အထူးသဖြင့် သီတင်းကျွတ်ညတွေဆို မီးထွန်းကားထွန်းရင်း လမ်းတကာနှံ့အောင်လည်ခဲ့တာတွေ။ ဖယောင်းသားတွေကို စုနိုင်သမျှစုပြီး မီးသရဲဆော့ခဲ့တာတွေ။ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ည သူခိုးကြီးညမှာ အစ်ကိုတွေနဲ့အတူတူ မီးကုန်ယမ်းကုန် ခိုးခဲ့တာတွေ။ ပိုက်ဆံကြဲပါဗျို့လို့ အော်ဟစ်ရင်း ပျော်ပါးခဲ့တဲ့ညတွေနဲ့အတူ မွေးရပ်ဌာနေဆိုတဲ့ အရာက နှလုံးမှာ ပုံရိပ်ထင်လာတယ်။ ဘုရားကြီးပွဲရဲ့ အငွေ့အသက်တွေက ရင်ကိုတဖျတ်ဖျတ် လာရိုက်ခတ်ရင်း။ ရုပ်စုံပွဲ၊ ပွဲဈေးတန်းတွေနဲ့ လူလှိုင်းတွေရဲ့ ရွှေ့လျားမှုတွေပါ ရုပ်လုံးကြွ အသက်ဝင်လာသလိုလို။ တိုက်လာတဲ့ လေပြည်အေးနဲ့ အတွေးစတွေက နောက်ထပ်..
ကိုယ့်ရပ်ရွာမဟုတ်ပေမယ့် တာဝန်ဆိုတဲ့အရာကြောင့် နောက်ဆက်တွဲပြီး စွန့်လွှတ်လိုက်ရတဲ့အရာတွေထဲမှာ လသာညတော့မပါဘူးမဟုတ်လား။ ကျောင်းတက်စအရွယ်ဆိုတော့ ငယ်ဖော်တွေနဲ့ပေါ့။ ကွင်းပြင်ကျယ်ကြီးထဲက ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း လသာညတွေကို ကျော်ဖြတ်ဖူးခဲ့တယ်။ အရွယ်ရောက်စ အပျံသင်စကားတွေ နားထောင်ရင်းနဲ့ လသာညတွေကို ကုန်လွန်စေမှန်းမသိလောက်အောင်။ ဖိုးလမင်းကို အောင်သွယ်ခိုင်းမယ်တို့ ၊ အချစ်ကိုဘယ်လိုပြောရမယ်တို့ သီချင်းတို့ကို ဆိုညည်းတတ်စပြုလာပြီ။ ဘာမှန်းညာမှန်း သေချာမသိပေမယ့် မောင့်လပြည့်ဝန်းကိုဆိုရရင် စိတ်က သီချင်းထဲမှာ နစ်ဝင်သွားတတ်တာ မျိုးတော့ ခံစားတတ်လာပြီပေါ့။ ပြီးတော့..
လရောင်ရဲ့ ဖမ်းစားမှုဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အနက်ဖော်ချင်နေတတ်တာမျိုး။ တကယ်ပဲ လရောင်အောက်မှာ အချစ်ဆိုတဲ့ သိပ်မွေ့နူးညံ့မှုတွေ ဖြစ်တည်စေတတ်သလားရယ် စောကြောမိချင်လာတယ်။ အဖြေရဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့အချိန် မရသေးခင်မှာပဲ လူငယ်တို့ရဲ့သဘာဝ လသာညဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာကို မေ့ပျောက်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေက ဖုံးလွှမ်းအုပ်စိုးသွားကြပြန်ရော။
ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ အတွက် လပြည့်ညတွေတိုင်း ဓမ္မတေးသံ၊ ပရိတ်တော်ရွတ်ဖတ်သံတွေ ကြားမှာ ရောက်လာဖို့။ ဘုရားစေတီပုထိုးတို့မှာ ဆီမီးကိုးထောင် စသည်စသည် ပူဇော်ခြင်းတွေမှာ တတပ်တအား ပါဝင်ဖြစ်လာသည်။ ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ လသာညတွေကို တောင်ဘက်မုဒ် စောင်းတန်းတွေကနေ မမှိတ်မသုန် ကြည့်တတ်လာသည်။ ညမို့ ပတ်ဝန်းကျင်လေထုကြောင့် အေးချမ်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲ စိတ်ထဲက သိသိသာသာကြီး အေးချမ်းငြိမ်သက်စေတာကိုပါ ခွဲခြားသိမြင်တတ်လာတာမျိုးပါ။
နောက်ပိုင်း အမိမြေနဲ့ ဝေးတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ လပြည့်ညဆိုတဲ့ အကြောင်းက ဘယ်လိုမှ ပေါ်ပေါက်မလာဖြစ်တော့။ ပြတင်းပေါက်ဆိုတဲ့အရာနားမှာ မဟုတ်ပဲ လက်ထဲက ကွန်ပြူတာ ပြတင်းပေါက်ဆီကနေပဲ သွားချည်လာချည် စုန်ဆန်မျောလို့။ ရုပ်ဝတ္ထုတွေ အားလုံးက ကွန်ယက်တွေထဲမှာပဲ ပျောက်ဆုံးကုန်ကြတယ်။ ဒီလှိုင်းတွေထဲကနေပဲ လူတွေ ဈေးဝယ်လားဝယ်ရဲ့၊ စကားပြောလား ပြောရဲ့ နဲ့ပေါ့။ အချိန်တွေ အကွာအဝေးအတိုင်းအဆ တွေကို ကန့်သတ်မဲ့စေတယ် မဟုတ်လား။
ပြတင်းပေါက်ဖွင့်လိုက်မှ အဝေးပြေးလမ်းမဆီက ကားမီးတန်းတွေကိုလည်း မြင်လိုက်ရတော့တယ်။ အင်း မြို့ပြစရိုက်လက္ခဏာတွေကို အားကျမက်မောမိတဲ့ ကိုယ့်အဖြစ်ကို ပြန်မြင်မိသွားပြီ။ ကိုယ့်ရပ်ရွာက လပြည့်ညတွေနဲ့တော့ တခြားစီပဲပေါ့။ ဘယ်သူမှ မရှိဘဲ ကိုယ်တယောက်တည်း ရပ်နေမိတဲ့ အခန်းကျဉ်းထဲကနေ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေနဲ့အတူ တလမ်းလုံးပြည့် ထုပ်ဆီးတိုးခဲ့တာကို ဆွဲယူလို့မဖြစ်နိုင်ဘူး မဟုတ်လား။ အဲ့ဒီလမ်းတွေက မျက်စိရှေ့မှာ မြင်နေရတဲ့ အဝေးပြေးလမ်းမလောက် မကောင်းပေမယ့် လမ်းမကောင်းဘူးရယ်လို့ စိတ်ထဲမကွက်မိ ခဲ့ပါဘူးလေ။
လသာညနဲ့အတူ ဖြန့်ကျက်နေမိတဲ့ အတွေးတွေကို အထပ်ထပ်ပြန်ရုပ်သိမ်းဦးမှ။ ရှားပါးရှားပါး စိတ်လိုလက်ရ ထွက်ကြည့်မိလို့ မြင်လိုက်ရတဲ့ လသာညရဲ့ အလှကို စနစ်တကျ ထုတ်ပိုးရင်း နောက်တခါ လသာည ရောက်လာဖို့ကိုသာ…. ။
at 4:27 PM 16 comments